မြစ်ဆုံ Media Group: October 2015
ကုလားကြ လူလူချင်းမခွဲခြားပါနဲ့ဆိုပြီး ကြင်နာပြပြီ ဘုန်းကြီးတွေ ကြ ခွဲခြားတတ်တဲ့ နွား တကမ္ဘာလုံး အစ္စလာမ်ဘာသာကို အကြမ်းဖက် ဘာသာပြောနေတာကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ်ဘာသာ စာချ ဘုန်းကြီးတပါးကို အကြမ်းဖက် သမားလို့နံမည် တတ်ရဲတဲ့ နွား
ဘုန်းကြီးတွေ ကြ ခွဲခြားတတ်တဲ့ နွား
ကိုယ်ဘာသာ စာချ ဘုန်းကြီးတပါးကို
အကြမ်းဖက် သမားလို့နံမည် တတ်ရဲတဲ့ နွား
ဘုန်းကြီးတပါး ဖာသည်မ ဆဲတာ
ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်နေတဲ့ နွားး
သူပါတီ မဲမေးတဲ့သူပဲ အကောင်းပြော
လူတိုင်းက လူလို သိတတ်ပြီး
ကြိုက်တဲ့ပါတီ မဲပေး အပြစ်မပြောပေမဲ့
မြက်စားပြီးကြီး ဘို့ ကြီးတခုထဲပါတဲ့ နွားက
လိုက်ခွေ့ တယ် ဗျ
ကုလားပြောမိရင် စိတ်တိုတတ်တဲ့ နွားး
ကုလား ဘက်က နာတတ်တဲ့ နွားး
ရီစရာ အမြဲပြောတတ်တဲ့ နွား
ပရိတ်ကြီး၁၂သုတ် ကို အလွတ်ရတဲ့နွား
ထေရဝါဒ စစ်စစ်ပြောပြီး ဘုန်းကြီးတွေ
ကိုယ်ခြံတိုင် လာလာခွေ့တဲ့ နွား
လူလို မသိတတ်တဲ့ နွား
ပါးစပ်က မချတဲ့ နွား
ကုလားတွက် လူ့ အခွင့်ရေးအော်ပေးနေပေမဲ့
ကိုယ့်လူမျိုး အခွင့်ရေးဆို လိုက်ပိတ်တတ်တဲ့ နွား
သူပထွေး တွေက အများသား
NLD ပါတီဝတ်စုံဖြင့်တွေ့လျင် ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရမည် ကြောက်သဖြင့် ဝတ်စုံချွတ်ထွက်ပြေးရာမှ ရဲအဖမ်းခံရ။
NLD ပါတီဝတ်စုံဖြင့်တွေ့လျင် ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရမည် ကြောက်သဖြင့်
ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မီဒီယာ၊ NLD ကြေညာချက်နှင့်
၅၉/(စ) ကိုပြင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူတိုင် သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီ ပါတီမှအနိုင်ရခဲ့လို့ သူ့မအနေနဲ့ သမ္မတ မဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြေားကြားသွားပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ သမ္မတ ကပဲဦးဆောင်တယ်လို့ နားလယ်ထားတယ် သမ္မတ မဟုတ်သောသူက အစိုးရအဖွဲ့ကိုကျိုးကိုင် ဦးဆောင်မည် ဆိုသော ဒီမိုကရေစီ သည် မည်သို့သော် ဒီမိုကရေစီပါနည်း?
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အမှန်တကယ် လေးစားတယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီစကားမျိုးမပြေားသင့်ပါ ဟု ယူဆပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသက်ကြီးလာ၍လားမသိ ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ်မှု့ အားနဲလာတာကို အများကြီးတွေ့လာရပါသည် ။
နိုင်ငံခြားသားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုထားသူ မိမိနိုင်ငံသား မိသားစုဝင် စစ်စစ် မဟုတ်သောသူ အခြားနိုင်ငံသား ခံယူထားသော သူများကို မိခင်နိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိဆိုသော ၅၉/(စ) ပုံစံမျိုး ဥပဒေသည် နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိပါသည် ။
မြန်မာတစ်နိုင်ထဲမဟုတ်ပါ ဒါကို နိုင်ငံတကာဘွဲ့တွေယူခဲ့သော ပညာရှိမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မသိလေသလော?
၅၉/(စ) ကိုပြင်လိုက်ပြီးဆိုပါက နောက်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ် မဟုတ်သူများ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ရှိလာမည် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုသောခေါင်စဉ်အတွက် အလွန် အန္တရယ် ကြီးမားလှပါသည် ။
ဒါကို ဒေါ်စုကိုထောက်ခံနေကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာများ သတိထား စဉ်းစားရန် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ အသက် ၇၁ နစ်ရှိပါပြီး ၅၉(စ) ကိုပြင်ခြင်းသည် ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်နိုင်ဘို့ထက် အခြား မြန်မာစစ်စစ် မဟုတ်သောသူများအတွက် သမ္မတ ဖြစ်ရန် အခွင့်အလန်ပိုများသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဦးနေအောင် NLD ကိုမထောက်ခံတော့... သူတို့ရ ရာလက်နက်ကိုင်စွဲပြီး သွားပုတ်လေလွင့်ပြောလိုက်ကြတာ... စိတ်ဓါက်တွေ တော်တော်အောက်တန်းကျတာပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်မည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တင်သွင်းခဲ့လျှင် Credit: Naw Ko
အကယ်၍ NLD သာ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရင်ဘုရားဘယ်လိုမြင်မလဲ။
နိုင်စေချင်တာကြာပြီ။ နိုင်စေချင်လို့ ဦးဇင်းတို့က အပြုသဘောနဲ့ထောက်ပြခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေက ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူး။ အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြတာကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးကတည်းကိုက ပါတီရဲ့အနာဂတ်၊ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်၊ Plan တွေဆွဲပြီးလုပ်ရင် ဒီလောက်ပြာယာမခတ်ဘူး။
ကျူပ်က အဲဒီကတည်းက ချပြတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ချိန်ပီယံကို ဖြိုဖို့အတွက် Traning တွေ လုပ်ရမည့်အစား ချန်ပီယံခါးပတ်ရ ရင် ငါ့ခါးနဲ့တော်မှ တော်ပါ့မလား၊ ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကို ကိုယ့်ခါးနဲ့တိုင်းပြီး ချုပ်ခိုင်းတာ ကျုပ်အဲ့ကတည်း က သူတို့ကို အားမရတာ။ ကျုပ်တို့က နိုင်စေချင်တာ ရှုံးစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးစောင့် ဥပဒေအရင်ဆုံး အားကိုးတာ NLD ကိုအရင်ဆုံးအားကိုးတာ။ NLD က လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မညီဘူးလို့ ပယ်ချခဲ့လို့ အစိုးရဆီရောက်လာတာ။ အဲဒီတော့ သမ္မတကြီးက အခုချိန်အထိ အမှာစကား တစ်ခွန်း မရှိဖူး သေးဘူး။
ဦးသိန်းစိန် ကိုထောက်ခံတယ်။ ချစ်လို့ထောက်ခံတယ်လို့မထင်နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်း သူသွားနေလုိ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုရင် ကျူပ်ကို သင်္ဃန်းချွတ်ပြီး ထောင်ချခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင် ကျုပ်အသေအလဲကိုမုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ် အမျိုးသားရေး မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ကျုပ်သူ့ကိုလက်ခံမိတာ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဆိုရင် ကျုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရူးအမူးချစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားရေးမျက်စိနဲ့ ကျုပ်ဘေးဖယ်ထားတယ်။
Credit.. Mizzima သတင်းဌာန
သင်ဇာက nld ဆိုတာထက် အန်တီစုကို ပိုကြိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ မိန်းမသားချင်းဆိုတော့ ပိုအားပေးတာပေါ့နော်။ Fb လိုsocial network တွေမှာ ကုလားဖြူမယားလို့ အန်တီစုကိုပုတ်ခတ်နေကြတာ တွေ့တယ် ။ အမှန်က ကုလားဆိုရင် တောင်မှ အသားဖြူသေးတယ် ဘာဖြစ်လဲ ။သင်ဇာဆိုလဲ ယူမှာပဲ ။
သင်ဇာက nld ဆိုတာထက် အန်တီစုကို ပိုကြိုက်တာပါ။
ပြီးတော့ မိန်းမသားချင်းဆိုတော့ ပိုအားပေးတာပေါ့နော်။
Fb လိုsocial network တွေမှာ ကုလားဖြူမယားလို့
အန်တီစုကိုပုတ်ခတ်နေကြတာ တွေ့တယ် ။
အမှန်က ကုလားဆိုရင် တောင်မှ အသားဖြူသေးတယ်
ဘာဖြစ်လဲ ။သင်ဇာဆိုလဲ ယူမှာပဲ ။
Nld ကို နိုင်စေချင်တာက လွတ်လပ်စွာ ဝတ်စားပြီး
သရုပ်ဆောင်တာတွေ လုပ်ချင်လို့ပါ ။
အစ်ကို ဝိုင်းတို့ မခိုင်ကြီးတို့ကလည်း nld နဲ့ အန်တီစုကို
မဲပေးပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင် တစ်ခေတ်ဆန်းအောင် လုပ်ဖို့
ဖော်ချွတ် sexy ပြကွက်တွေ ရိုက်ရတာခုခေတ်ဆို
ပိုပြီး အဆင်ပြေစေချင်တာတွေ ပါတယ်ပေါ့နော် ။
ဆင်ဆာ မရှိလေ ပိုကောင်းလေပေါ့ ။
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြှ ဆိုတဲ့ nld မဲဆွယ်ကားမှာ
အသေအချာ သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ် ။
အတိုတွေ မလုံတာတွေ ဝတ်ပြလို့ လူငယ်တွေ အတုယူတာ
မကြည့်ချင် မကြည့်နဲ့ပေါ့ ။သင်ဇာက အတင်းမကြည့် ခိုင်းပါဘူး ။
သင်ဇာ ခံယူချက်ကတော့ အနောက်တိုင်းစတိုင်
ဇာတ်ကားတွေ များများရိုက်ပြီး နိုင်ငံတကာကို
သင်ဇာ နောက်ထွက်မယ့် ဇာတ်ကားတွေကို
မောင်နှမ မိသားစု အတူတူကြည့်ဖို့ မသင့်တော်ရင်
တစ်ယောက်တည်း ခိုးကြည့်ပေါ့ ။
အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။
အလင်းတန်း ဂျာနယ် အင်တာဗျူး
"ယနေ့စက်သုံးဆီ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး" မှတ်ချက်။ ။အချိန်နှင့်နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
"ကားဟောင်းစလစ်၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့် ကညန ရောက်ရှိ အက္ခရာနံပါတ်" မှတ်ချက်။ ။အချိန်နှင့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ယုံကြည်ခြင်း၏ အခြားတစ်ဖက်က NLD
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲထည့်ရာမှာ NLD မပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးမဟုတ်လျှင်ပြီးရော
ဆိုပြီး တွေ့ကရာ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေကို မျက်စိ
မှိတ်ပြီး မဲပေးခဲ့ဖူးတယ် ။
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဟာ NLD ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာ ဒေါ်စုကြည် ဒါပဲရှိတယ် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တဲ့ NLD
အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိခဲ့သေးတယ် ။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ကိုယ့်ဒေသနဲ့
မသက်ဆိုင်ပေမယ့် NLDက မဲအပြတ်အသတ်
အနိုင်ရလို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရတာကို ခုချိန်ထိ မြင်ယောင်နေတုန်းပါပဲ. . .။
တစ်နှစ် နှစ်နှစ် သုံးနှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလရဲ့
ယုံကြည်မှုတွေ ခုလို တက်တက်စင်အောင် ဆန့်ကျင်ဘက်အသွင်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ
ခုတော့ ချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်း ကျောချင်းကပ်
စာတစ်ရွက်မှာ ချစ်ခြင်းရဲ့အခြားစာမျက်နှာ မုန်းခြင်း
ဆိုတဲ့တစ်ဘက်ကို NLDက လုံးလုံးလျားလျား
ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ. . .။
NLDအပေါ် အားကိုးမှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ လောင်ကျွမ်းပြာကျ
၂၀၁၀မှာ NLD မဟုတ်ရင် မည်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ NLDကလွဲရင် အမျိုးသားရေး ရှေးရှုတဲ့ပါတီ အားလုံးကို ယုံကြည်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ. . .။
ဟုတ်ကဲ့ပါ. . .လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLDကလွဲရင် အမျိုးသားရေးအတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်မယ့် မည်သည့်
ကျွန်တော် မဲပေးသွားပါ့မယ် ။
►စိမ်းရောင်လွှမ်းခြုံ..အားပေးပုံ.. မြင်သူအေးမြ..ကြည်နူးရ. ပြည်ခိုင်ဖြိုးပီသ◄ နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိဘုရားရှေ့က ကွင်းမှာ အစိမ်းရောင်တွေ လွှမ်းခြုံခဲ့တဲ့ပွဲ။
လမ်းဘေး မျက်လှည့်ပွဲတောင် လူအုံကြည့်တတ်တဲ့ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တွေကို ကားနဲ့တင်ခေါ်လာပြီး နယ်မြို့အနှံလိုက်ပြကာ တီရှပ်တွေအလကားပေး နေ့စားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အင်အားပြ လူများနိုင်မည့် အခါကြီး ရက်ကြီးတွေကို အချိန်ကိုက်ရွေး ဂွင်ကျအောင် ဂွင်ချပြီးမှ လူအများအပြား တက်ရောက်သည် ထင်ရအောင် အားလုံးပါနိုင်သည့် ရှု့ထောင့်မှ ဓါတ်ပုံရိုက်
လမ်းဘေး မျက်လှည့်ပွဲတောင် လူအုံကြည့်တတ်တဲ့ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တွေကို ကားနဲ့တင်ခေါ်လာပြီး
နယ်မြို့အနှံလိုက်ပြကာ တီရှပ်တွေအလကားပေး နေ့စားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အင်အားပြ
လူများနိုင်မည့် အခါကြီး ရက်ကြီးတွေကို အချိန်ကိုက်ရွေး
ဂွင်ကျအောင် ဂွင်ချပြီးမှ လူအများအပြား တက်ရောက်သည် ထင်ရအောင် အားလုံးပါနိုင်သည့် ရှု့ထောင့်မှ ဓါတ်ပုံရိုက်
ပြီးတော့ မီဒီညာမှာ ထည့် ၊ ဘယ်မြို့ကိုဖြင့် သိမ်းလိုက်ပြီ ၊ ၉၅% အထက် မဲနိုင်ထားပြီ စသည့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အရူးချီးပန်း စကားတွေ လျှောက်ပြော
လေလှိုင်းပေါ်က အရူးများရေ ရပ်ကွက်ထဲ ဆင်းကြည့်ပြီး မြေပြင်က လူထုဆန္ဒကိုလည်း တစ်အိမ်တက်ဆင်း မေးကြည့်ပါအုံးကွယ်
မင်းတို့ပေးတဲ့အင်္ကျီဝတ် မင်းတို့ပေးတာယူပြီး မင်းတို့ခိုင်းတာ လုပ်နေတဲ့ သူတွေကတောင်
မဲပေးတယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက်မဲပေးရတာပါဗျာ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ ကျုပ်တို့ကတော့ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ NLD ကို လုံးဝမဲမပေးဘူး
အခြားမဲပေးရမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထဲက မိမိမြို့ရွာနှင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး အကျိုးကို အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး မဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောနေကြပါတယ်။
အိုဘယ့် NLD ... ကြံ့ဖွံ့ကတော့ သူအခြေအနေ သူသိလို့ သိုသိုသိပ်သိပ်နေနေပေမယ့်
၂၀၁၅ တွင် ၂၀၁၂ တုန်းကလောက် လူထုထောက်ခံမှု အပုံတစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံတောင် မရှိတော့တာကို အမှတ်မရှိပဲ လူထုမျက်စိနောက်အောင် ဆက်လုပ်နေအုံးမည် ဆိုရင်တော့
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရှုံးကြီးရှုံးမည့် အပြင် သေချာနေသည့် ဥက္ကဠကြီး၏ ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်မှာတောင် ပိုးစိုးပက်စက် ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးသွားလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း
အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး နှင့် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များ ၊ အမျိုးကောင်းသား ၊ အမျိုးကောင်းသမီးများကို အထက်လမ်း အောက်လမ်း နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် စော်ကား ပုပ်ခတ် တိုက်ခိုက်နေကြသော
လူ့အခွင့်အရေးသမား အမည်ခံ ဒီမိုလုပ်စား အချောင်သမား မွတ်ကုလားယုတ် စပွန်စာစား ခွေးသူတောင်းစား နွားများအားလုံးကို သိစေအပ်ပါသည် ။ ။
( ၂၉.၁၀.၂၀၁၅ )
နေအိမ်ပေါ်တက်၍ တရားခွေအား ဒီဗီဒီပြစက်ထဲမှထုတ်ယူသွားသည့် NLD ပါတီ ရပ်ကျေးဥက္ကဌ အား တရားစွဲမည်
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့က လေးမျက်နှာမြို့နယ် ယင်းဆယ်ကျေးရွာ ဦးအစမ်းနေအိမ်တွင် ဦးအစမ်းနာရေး(၁)လပြည့် တရားနာ ဆွမ်းကြွေးပြီးနောက် မ ဘ သ ဩဝါဒခွေ ဖွင့်ထားစဉ် ယင်းဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကိုကိုအောင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးချစ်ကိုကို နှင့် အပေါင်းအပါတစ်စုတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ရှင်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ကို အသိမပေး အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ပေါ်သို့တက်ရောက်ကာ စက်ထဲမှခွေကို ထုတ်ယူသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် သူတစ်ပါးအိမ်ပေါ်သို့ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့်အပြင် ဒီဗီဒီဖွင့်စက်ထဲမှ ခွေကိုပါ ယူဆောင်သွားသည့်အတွက် NLD ပါတီ ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့က ဦးအစမ်း၏ဇနီးအား တောင်းပန်ရန်နှင့် တရားခွေအား ပြန်ပေးရန် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သော်လည်း ၄င်းတို့က တောင်းပန်ခြင်းလည်းမလုပ်၊ တရားခွေကိုလည်း ပြန်မပေးသည့် အတွက် ဦးအစမ်း၏ ဇနီးဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က ၄င်းတို့အား တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“NLD ဥက္ကဌ လုပ်ပုံက တော်တော်အရုပ်ဆိုးတယ်။ နာရေးအိမ်ပေါ် အတင်းတက်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ တရားခွေကို ထုတ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ အကျိုးဖျက်ဆီးမှုတွေ အပြင် သူတစ်ပါး ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုပါ ထိပါးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင် ကြားဝင် ညှိနှိုင်း ပေးပေမယ့် သူတို့က တောင်းလည်း မတောင်းပန်နိုင်ဘူး။ တရားခွေကိုလည်း ပြန်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတော့ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ကလည်း ဒီအတိုင်း ဘယ်ငြိမ်ခံနိုင် မလည်း။ ယောက်ျားနာရေး ပူဆွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ အိမ်ပေါ်တက် စော်ကားသွားတာဆိုတာ့” ဟု လေးမျက်နှာမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“NLD သာ အာဏာရလို့ကတော့ မလွယ်ဘူး။ NLD က ကောင်တွေက အခုတောင် တော်တော်ရိုင်းတယ်။ ဘုရားမှန်းတရားမှန်းလည်း မသိတတ်ကြ။ ဒေါ်စုသည်သာ ကိုးကွယ်ရာ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ လုပ်ချင်ရာလုပ်တာဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုး ချိုးနေကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ကို တကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်လို့ မဟုတ်ပဲ ငါတို့မှအမှန်၊ ကျန်တဲ့သူတွေ က အမှားလို့ ခံယူနေကြတယ်၊ မတူတဲ့အမြင်တွေကို နည်းနည်းမှ သည်းမခံနိုင်ကြဘူး” ဟု ပုသိမ်မြို့နေ ကိုထွန်းနိုင် က ဝေဖန်ပြောကြား ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ .. စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ ကို အိပ်မက်တွေမက်ပြီး တည်ဆောက်နေကြတယ်
စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ ကို အိပ်မက်တွေမက်ပြီး တည်ဆောက်နေကြတယ်
တကယ်လက်တွေ့ ဘဝမှာတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်ဆိုတာ
ဘာမှ အနှစ်သာရမရှိသလို ဘာမှလဲ အဓိပ္ပါယ် မရှိလှဘူး..
လက်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ချင်း
ဘာမှ မမြင်ရ၊ မသဲကွဲသေးတဲ့
အနာဂတ်ကိုပဲ ထိုင်ပြီး မျှော်နေမလား..
လက်တွေ့ ဘဝကို သဘာဝကျကျ စဉ်းစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ့အရေး နိုင်ငံရေးကိုလဲ
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေး မဖြစ်စေချင်ဘူး..
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံပါတီအနိုင်ရလို့ 
မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဘာဖြစ်မယ် ၊ ညာဖြစ်မယ်၊
နေ့ ချင်း၊ ညချင်း ချမ်းသာ မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်နေတာထက်
အခုလက်ရှိ နိုင်ငံတော် တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်
အစိုးရကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့ ကူညီပြီး
ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်ဆို တာကို
လက်တွေ့ ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်တာ ရုပ်လုံးပေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်
ကြီးမားတဲ့အရွေ့ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်
မမြင်ရတဲ့ အနာဂတ်ကို မျှော်တွေး
မဖြစ်လာသေးတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို စောင့်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့
နေဝင်ချိန်တွေ ဟာ ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်..
တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေမှုအပေါ် ကို
သွေးထိုးမြောက်ပင့်သူကို ဥပက္ခာပြုလို့ 
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း သတ်နေပါတယ်လို့ 
မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ အထာနဲ့ 
ဟားတိုက်လို့ရီနေကြတာကို သိသိရက်နဲ့ 
အခု ရှမ်းမြောက် ရှမ်းအရှေ့ ကချင် ပြည်နယ်
တွေ မှာ တပ်မတော်က စစ်သားတွေ စစ်တိုက်နေရ
တယ်ဆို တာ ပြည်သူတွေ အရမ်းလိုချင် တဲ့
ဒီမိုကရေစီ ကြောင့် ပဲ ။
ဒီနေ့ အာဏာရှင် စနစ်ကို ပြန်အသက်သွင်း
ကြည့်လိုက် အဲ့ သောင်းကျန်းသူကို ကွန်မြူ
နစ်ကြီးက ခေါင်း ပုတ်ပြီး ငြိမ်ခိုင်းလိုက်လိမ့်မယ်။
ဒီလောက်မှ နားမလည်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀
အခြေ အနေ ကို ခင်ဗျာ တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။
နောင်အချိန်ဘာဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တာထက်
လက်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေကို ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ 
လက်တွေ့ ကျကျ ရင်ဆိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့
ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကို
စိတ်ကူးယဉ်ထက် လက်တွေ့ ဘဝကို ရင်ဆိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပါစေ..
"စိတ်ကြွဆေး" ဆိုတာတွေဟာ CNS ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ အမျိုးမျိုးသောဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ "ယာမ" လို့လူသိများတဲ့ Amphetamines (မင်မ်ဖက်တမင်း) ကို စဖေါ်စပ်ခဲ့တာက ၁၈၈၇ ကတည်းကဖြစ်တယ်။ လူကနေ အလိုလို ထုတ်ပေးနေတဲ့ Adrenaline နဲ့ Noradrenaline တွေနဲ့တူတယ်။ (ရှော့ခ်) ရတာ၊ ပန်းနာထတာတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ အသက်ကယ်ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ရင်ကျပ်လို့ပေးတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးထဲမှာ ထည့်ထားတတ်တယ်။
Euphoric effects ပီတိစိတ်တွေသာ ထင်မြင်နေစေတဲ့ အစွမ်းကြောင့် ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်။ ဆေးသုံးထားသူဟာ စိတ်တက်ကြွနေမယ်၊ တခုခုကို အာရုံစိုက်နေပြီး၊ သူများတွေကို ဂရုမထားတော့ဘူး။ မအိပ်ဘဲ အကြာကြီး နေနိုင်တယ်။ မမောလွယ်ဘူး၊ အားကစားလုပ်ရင် ပိုလုပ်နိုင်တယ်။ ခံနိုင်ရည်ပိုတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်များစေမယ် ဆိုတဲ့ အစွမ်းတွေ ရစေတယ်။
Methamphetamine (မက်သဖန်တမင်း)၊ Ephedrine (အဖက်ဒရင်း) Cathinone (က်သီနုန်း)၊ MDMA (Ecstasy) (အက်ကတက်စီ) DOM (STP) ဆိုပြီး ဆင်တူတွေ ရှိတယ်။ သူများဆီမှာ Uppers, Bennies, Beans, Speed, and Crank ဆိုတဲ့ အရပ်သုံးနာမည်တွေ ရှိတယ်။ Pills ဆေးလုံး၊ Powder ဆေးမှုံ့ Crystals ဆေးခဲဆိုပြီး အမျိုးမျိုးလာတယ်။ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ ရှူဆေး နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်နည်းတွေနဲ့ သုံးကြတယ်။ တခါသုံးရင် ၄-၆-၁၂-၂၄ နာရီခံတယ်။
ရေရှည်မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာသလဲ။ အရင်ခံစားတာမျိုး ရချင်ရင် ဆေးအဆ ပိုလိုချင်လာမယ်။ နှလုံးအပေါ် ဒဏ်များလာမယ်။ သွေးဖိအားတက်မယ်၊ ဒါ့ကြောင့် Heart disease, Heart attack, Stroke နှလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ပိုပြီး ရလမ်းများစေတယ်။
ဆေးစွဲတယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းစွဲတာဆိုပြီး ရှိတယ်။ ဒီဆေးက ၂ မျိုးလုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Addiction ဆေးစွဲနေသူဆိုရင် Psychotic episodes စိတ်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Overdose ဆေးများသွားရင် နှလုံးခုန် မြန်မယ်။ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်မယ်၊ တုံတုံရီရီဖြစ်မယ်။ သူများကို မယုံတာများမယ်၊ ကြောက်တာ၊ ကျိုးကြောင်း မဆီလျှော်တာ၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးတာ၊ တလွဲထင်မြင်တာ၊ တက်တာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
- Amphetamines နဲ့ Cocaine or Ecstasy ရောတာ အန္တရာယ်များတယ်။ သတ္တိတွေက တူတယ်။
- Amphetamines နဲ့ (MAOIs) စိတ်မကျဆေးတွေရောရင် ဆေးစွမ်းက ၆ ဆ တက်စေမယ်။
- Amphetamines ဆေးသုံးစွဲထားသူကို နောက်ထပ် ၁-၂ ရက်အထိ စစ်ရင်သိတယ်။
ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဆေးအဆိပ် လက္ခဏာတွေကတော့ Psychosis စိတ်မူမမှန်တာ၊ Hallucination သူများမမြင်တာတွေ မြင်နေ၊ သူများမထိတွေ့တာကို ထိတွေ့နေတယ်လို့ထင်တာ၊ Anxiety စိုးရိမ်စိတ်များတာတွေ ဖြစ်မယ်။ ဆေးကြောင့် Hyperthermia အပူချိန်လွန်ကဲတာ၊ Heart arrhythmia နှလုံးခုန်မမှန်တာ နဲ့ Stroke (စထုပ်ခ်) တွေကနေ သေဆုံးနိုင်တယ်။
မူးယစ်ဆေးတွေထဲက Methamphetamine (မက်သဖန်တမင်း) ရဲ့ထူးခြားချက်က Neurotoxic အာရုံကြောကို ထိခိုက်စေတယ်။ MDMA ကတော့ ဦးနှောက်ထဲမှာ Glutathione နဲ့ Vitamin E တွေကိုနည်းစေတယ်။ ရေရှည်သုံးရင် Dependence ဆေးစွဲတယ်။ DOM ကတော့ ဆေးမစွဲစေဘူး။ Amphetamine (အင်မ်ဖတမင်း) ဆေးစွဲသူကိုကုရတာက Cocaine (ကိုကိန်း) ဆေးစွဲတဲ့သူတွေကို ကုရသလို အတူဘဲ။ ဆေးစွဲနေသူတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်၊ ပျင်းခြောက်နေမယ်၊ ဆေးကြောင့် ကောင်းတယ်လို့ ခံစားခဲ့ဘူးတာတွေကို တသတသ ဖြစ်နေမယ်။
နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်းများရောဂါ၊ မျက်စိ-ရေတိမ်ရောဂါ ရှိနေသူတွေ သုံးရင် သူများထက် ဆိုးတယ်။ Asocarboxazid, Tranylcypromine, Phenelzine ဆေးသောက်နေသူတွေနဲ့ အရက်သမားတွေက လုံးဝမသုံးသင့်ကြဘူး။
ဒုတိယ-ကမ္ဘာစစ်တုံးက ဂျာမန် တင့်ကားမောင်း စစ်သားတွေကို မအိပ်ချင်အောင် ပေးတယ်။ စိတ်ဓါတ် ကျနေသူတွေကိုလဲ ပေးတယ်။ ၁၉၉ဝ ကျော်မှာ လူငယ်တွေအကြား MDMA (Ecstasy) ခေတ်စားလာတယ်။ Amphetamine ကို Narcolepsy ရောဂါ နဲ့ ADHD ရောဂါတွေမှာ ကုသဆေးအဖြစ် သုံးတယ်။ Energy drinks အားဆေးလို သောက်ကြတဲ့ ဖျော်ရည်တွေထဲမှာ Amphetamines အနည်းနဲ့အများ ပါနေတယ်။
Amphetamines ဟာ "တရားမဝင်ဆေး" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝဝ၇ UNODC ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ လူပေါင်း ၁၅-၅ဝ သန်း ဆေးသုံးနေကြတယ်။
ကုလားကြ လူလူချင်းမခွဲခြားပါနဲ့ဆိုပြီး ကြင်နာပြပြီ ...
NLD ပါတီဝတ်စုံဖြင့်တွေ့လျင် ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရမည်ြေ...
၅၉/(စ) ကိုပြင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူတိုင် ...
ဦးနေအောင် NLD ကိုမထောက်ခံတော့... သူတို့ရ ရာလက်န...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်မည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို သ...
သင်ဇာက nld ဆိုတာထက် အန်တီစုကို ပိုကြိုက်တာပါ။ ပြီး...
"ယနေ့စက်သုံးဆီ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး" မှတ်ချက်။ ။အချိ...
"ကားဟောင်းစလစ်၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့် ကညန ရေ...
လမ်းဘေး မျက်လှည့်ပွဲတောင် လူအုံကြည့်တတ်တဲ့ ကျုပ်တိ...
နေအိမ်ပေါ်တက်၍ တရားခွေအား ဒီဗီဒီပြစက်ထဲမှထုတ်ယူသွား...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ .. စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ ကို အိပ်မက်တွေမ...
ဒေါ်စုကြည်က အာဏာလိုလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ၅၉(စ...
၅ နှစ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့သ...
မဲရုံတိုင်းတွင် “ ဖုန်းမပြောရ၊ ဓါတ်ပုံမရိုက်ရ ” စသ...
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ရာခိုင်နှုန်းဘာကြောင့် မထုတ်ပြန်တ...
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရလဒ်တူညီနေပါက ပြည်ထောင်စု ရွေးေ...
NLD အမတ်လောင်းများကို NLD ထောက်ခံသူများပင် စိတ်ပျက...
လော်စပီကာသံမခံနိုင်၍ စကားများရာမှ NLD အမတ်လောင်းဓ...
ပခုက္ကူမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးခန်း၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်...
NLD က သတ္တိခဲ ... ဓါးနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုလို့ ၀တ်ထားတဲ့ NL...
၀ိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ လယ်မြေစပါ...
၅၀၀တော့ မလုပ်နဲ့ဗျာ ၅၀၀၀ ဆိုရင်တော့ လိုက်မယ်လေ.......
NLD က ကောင်တွေက ကုလားဆို သိပ်ကြင်နာတတ်တာပဲ ဘာလို့ ...
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သူများတွေပြောတဲ့ အာဏာရှင်
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ချစ်လွန်းလို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံ...
►ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက◄ "Keep Refor...
ဘာတွေများ ပြောင်းလဲချင်နေတာလဲ NLD
ကျုပ်ကိုခင်ရင် မဘသ လို့ ခေါ်ပါ
အတိုက်ခံလား ဘုဂလန့် လား
ကျွန်တော် ရွာသွားတာ စိတ်မကောင်းစရာတွေ တွေ့ လာတယ်
``မီး´´ သတိပြု ``မီး´´ သတိပြု
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဒီမိုကရေစီသို့ ပြောင်းလဲချင်ကြသူမျာ...
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးရလဒ် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ စတင...
ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ အသံတွေချည့် ကြားေ...
"မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားသော ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများ၏ သ...
ဒေါ်စုကြည်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ ဗြိတိန်သားတစ်ယောက်ဟာ ...
ဒေါ်စု မပြောခဲ့သော စကားနှစ်ခွန်း
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲဟု သမ္မတ ဦ...
ယနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေသုံးသပ်ချက် အပိုင်း (၁)
ဘင်္ဂလီကုလားမျာ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကို မူဆလင်ပြည်...
ဒါဖတ်ပြီးမှ NLD ပါတီကိုမဲပေးဖို့ စဉ်စားပါ ~
သမ္မတကြီးကို နောက်သက်တမ်း(၅)နှစ်တာဝန် ဆက်လက်ထမ်းဆော...
ကြံ့ခိုင်ရေးနေရာ ဖယ်ပေးရန်မရှိဟု ရထားဝန်ကြီးဟောင်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမျိုးသားရေးနှင့် နိုင်ငံတေ...
အပတ်စဉ် ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတော် (လုံးခင်း ) ၂၀၁၄/၂၀၁၅...
ကချင်ပြည်နယ်၊ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မိုင်းနားကျေးရွာ...
နောက်ဆုံး မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် ထုတ်ပြန်...
NLD ပါတီတွင် သာကူးများ ၊ သူခိုးများ ရှိဟု ဦးဝင်းတ...
အထူး အရေးကြီး သတင်း အထူး အရေးကြီး သတင်း
၂၀၁၆ မတ်လ ၉ရက် တနင်္လာနေ့ မနက် ၈ နာရီ ၄၃ မိနစ်၊ ၁၂ စ...
မြန်မာပြည်လို မညီမညွှတ်မဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ ခုထိ မညီညွတ်လ...
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ ဒေါ်စုကို မကြိုက်တဲ့အချ...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ယနေ့ အောက်တိုဘာ ...
သူ့မှာ အလကားရတဲ့ နိုဘယ်ဆုမရှိဘူး။ သူ့မှာ နိုင်ငံတ...
လျှပ်စစ်ရထား နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ပြေးဆွဲမည်
ဒီမိုကရေစီ အတု " ============
"အာဏာ" တဲ့ နာမည်လေးကသာ ၂- လုံးထဲ အာဏာရဖို့ သံဃာ...
“သံဃာတော်များ နဲ့ NLD”
မည်သည့်ပါတီမဆို အနိုင်ရပါက အာဏာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ...
ကချင်စစ်မျက်နှာ ကချင်စစ်မျက်နှာ ကချင်စစ်မျက်နှာ
ဝေဟင်ပစ်မှတ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ် ... အထက...
မိမိကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးဖင်ကုန်းအော် ပြောင...
NLD ကတဲ့ .. ရိုင်းတာထက်တောင် ပိုသေးတယ်လို့ ပြောလို...
ရွေးကောက်ပွဲကြီး တဖြည်းဖြည်း နဲ့ နီးကပ်လာလေ အစိမ်း...
ကုလားမယားလို့ ခေါ်လို့ တရားစွဲချင်ရင် လာစွဲတဲ့ .......
လူ့အခွင့်အရေး တဲ့ … နားထောင်ကောင်းသလောက် သိတ်ရက်စက...
စိတ်စွမ်းအား စိတ်စွမ်းအား စိတ်စွမ်းအား
မြန်မာ့ရွှေအခေါက်ဈေး ၇၉၅၀၀၀ကျပ် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ၁၁၆၅ေ...
မဲပေးမည့်နေ့၌ မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့် အသွင်ဆောင်သော ပါတ...
ဒေါ်စုပြောတာနားယောင်ပြီး ကျောင်းမတက်ဘဲ မနေပါနဲ့
ကျမအတွေး ကျမ အမြင်.......
ဒေါ်စုအပေါ် (မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ) ဘုမသိဘမသိနဲ့ ထောက်...
NLD မှ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း "ထိုင်ခုံ ၃၃၄ ခုံ" ရလ...
ကျနေ်ာတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ရောင်လွှမ်းနေပါတယ်......
မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ အင်းတော်ကြီးဒေသ၊ နန့်မီးလောင်ကေ...
နောက်ဆုံး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေ...
NLD သမ္မတလောင်း ကိစ္စ ညီမင်းညို၏ အဖြေများ